Global Voices teny Malagasy » Mametraka “Tsangambato” ho an’ireo Fanafody Fampitoniana Ao Skopje ireo Mpanakanto Tsy Mitonona Anarana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2018 18:46 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Serbia, Fahalalahàna miteny, Fahasalamàna, Fanoherana, Hehy, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Nisy sary sokitra hafakely nipoitra tao Skopje, renivohitr'i Masedonia, ny 9 martsa: tsangambato ho an'ilay fanafody fampitoniana , Diazepam  (fantatra ihany koa amin'ny anarany hoe Valium).
Miendrika pilina 1,4 metatra amin'ny halavana ary miloko volomboasary ilay tsangambato. Napetraka teo akaikinà arabe iray  izy io, miaraka amin'ity fanazavàna manaraka ity:
Miaraka aminà mponina latsaky ny 2 tapitrisa mipetraka ao Masedonia, manahy ireo mpikatroka mafana fo fa maneho fiakaran'ny “fianteherana amin'ny pilina ” ity fiakaran'ny fampiasan'ny firenena fanafody fampitoniana ity, izay lazain-dry zareo fa miseho ihany koa any Bosnia sy Herzegovina , Serbia , ary Bolgaria. Tamin'ny 2014, nampitandrina  ny Tahirim-bolam-panjakana ho an'ny Fahasalamana fa mety hanapoizina ny fandraisana io fanafody io mihoatra nóho ny tokony ho izy, indrindra mandritra ny fitondrana vohoka. Asehon'ny tatitra farany nataon'io Tahirim-bola io , izay navoaka tamin'ny Desambra 2015, fa fanafody faharoa be mpanome indrindra anatin'ny taratasim-panafody ny Diazepam teo anelanelan'ny Janoary sy Jona tamin'ny taon-dasa.
Lisitr'ireo fanafody be mpanome indrindra tao Masedonia teo anelanelan'ny Janoary sy Jona 2015, navoaka ho isan'ny tatitra isaky ny enim-bolana  fanaon'ny Tahirim-bolam-panjakana ho an'ny Fahasalamana tamin'ny Desambra 2015. Mitana ny laharana faharoa ny Diazepam, mipetraka eo anelanelan'ny Enalapril  sy ny Lisinopril , izay ampiasaina amin'ny fitsaboana aretim-po.
Tapaho mandritra ny iray volana ny famatsiana Diazepam, ary hanomboka hanidina ny cocktails Molotov .
Tanatin'ny taona vitsy izay, foiben'ny fandaniam-bolam-panjakana goavana i Skopje tamin'ny alalanà tetikasa iray antsoina hoe “Skopje 2014 ,” izay nanomboka tamin'ny 2010 . Naboraky ny  Tambajotran'ireo Balkan Mpitatibaovao Mpanadihady fa nandoa € 634 tapitrisa  ($ 698 tapitrisa) tanatinà “zavatra” 136 samy hafa (birao fitantanan-draharaha 27, isan'izany ny Vavahadin'ny Fandresena  iray, tsangambato 34, kianja 5, Kodiarana Lehibe, ary rindrina vaovao ) ireo mpandoa hetra ao Masedonia (iray amin'ireo firenena mahantra indrindra ao Eoropa).
Faly tanteraka tamin'ireo “tetikasa fanatsaràna ” notarihan'ny Praiminisitra sy i Nikola Gruevski, deban'ny antoko mpitondra, ny biraon'ny kolontsaina ao Masedonia, satria nisy karazanà tsolitra sy sivana “nanafoana ireo feo manakiana”  teo amin'ny haikanto tranainy Masedoniana.
Ohatra, tamin'ny Skopje 2014, nanaiky ny hananganana tranobe efatra miendrika sambo apetraka any amin'ny reniranon'i Vardar eo afovoan'i Skopje ny fanjakana. Tsy nanome fanambarana ofisialy mihitsy ny amin'ny antony nampidirany izany tao anatin'ireo drafitra famaritam-paritra ny tanàna, na koa nanazava ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fomban-drazana sy ny tantara ao an-toerana. Tsy afaka nandehanana an-tsambo mihitsy ilay renirano, ary 240 kilometatra miala avy eo ny ranomasina akaiky indrindra. Amin'ny alàlan'ireo famatsiam-bola nomen'ny mpandoa hetra , mampiasa ireo fananana ireo hitantanana trano fisakafoana raitra dia raitra  ireo mpandraharaha mifandray amin'ny governemanta.
Teo amin'ny 200.000 ireo mpijery voasarik'io lahatsary YouTube  io tanatin'ny iray andro. Androany, maherin'ny 260.000 izany. Ho valin'io lahatsary io, nandefa haingana ny brigady mpamono afo ny governemantan'ny tanànan'i Skopje. Nitety  ilay renirano mihitsy ny lohan'ny mpamono afo hiezahany hanala ireo antsantsa. Raha nanakatra ilay trondro iny anefa izy, dia hitany fa tsy tena izy ireto farany: “Polystyrène” nafatotra taminà vatokely mba tsy hihetsiketsika ao anaty rano izy ireo.
Mitovitovy amin'izay ihany, nanohitra ny fahaverezan'ny tontolo maitso ao amin'ny tanàna ireo mpikatroka mafana fo, satria mihamaro ireo hazo tapahina hanamboarana fotodrafitrasa vaovao. Nanampy “maso” ny sasany tamin'ireo hazo tao an-tanàndehibe ireo mpanakanto, mahatonga azy ireo hiendrika olona matahotra .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/31/128842/
 fanafody fampitoniana: https://en.wikipedia.org/wiki/Antidepressant
 akaikinà arabe iray: https://www.youtube.com/watch?v=gY40vSz-yqs
 fianteherana amin'ny pilina: http://www.balkaninsight.com/en/article/pill%20addiction%20grips%20the%20balkans
 Bosnia sy Herzegovina: https://youtu.be/WqbGyhZsiHA
 tatitra farany nataon'io Tahirim-bola io: http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Polugodisen%20izveshtaj%202015%20potrosuvacka.pdf
 cocktails Molotov: https://en.wikipedia.org/wiki/Molotov_cocktail
 Naboraky ny: http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed
 € 634 tapitrisa: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/
 Vavahadin'ny Fandresena: https://globalvoices.org/2012/03/28/macedonia-kazakhstan-triumphal-arches-to-celebrate-20-years-of-independence/
 rindrina vaovao: https://globalvoices.org/2014/12/30/macedonians-hug-skopje-shopping-centre-to-protect-it-from-baroque-isation/
 tetikasa fanatsaràna: http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2015/03/macedonia-facade-150318135440964.html
 “nanafoana ireo feo manakiana”: http://www.balkaninsight.com/en/article/critical-voices-erased-from-macedonian-arts--11-05-2015
 nampidirany izany tao anatin'ireo drafitra famaritam-paritra : http://www.balkaninsight.com/en/article/skopje-s-pirate-ships-cause-stir
 famatsiam-bola nomen'ny mpandoa hetra: http://www.balkaninsight.com/en/article/photo-skopje-s-riverside-galleon-sets-anchor
 trano fisakafoana raitra dia raitra: https://www.youtube.com/watch?v=ewLsBmeiqe8
 lahatsary YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u-Z_5Bt1FtM